घ्याम्पे डाँडा पैदल यात्रा (भिडियो सहित) | Lekha Rachana
Home/ संस्मरण/घ्याम्पे डाँडा पैदल यात्रा (भिडियो सहित)
Muskan bodh १२ जेष्ठ २०७६, आईतवार १०:२१
घ्याम्पे डाँडाँ अर्थात पाइलट बाबा आश्रम हाम्रो भ्रमणको अर्को गन्तव्य स्थल
प्रत्येक महिनाको एउटा शनिबार कुनै प्राकृतिक दृश्यले भरिपूर्ण स्थलमा पैदल यात्रा गरि जाने भन्ने हाम्रो उद्देश्य अनुसार हामीले यो समय घ्याम्पे डाँडाँ जाने योजना बनायौ त्यहि अनुसार हामी (गुरु, विश्वविजय, प्रतिभा, शान्ति र म) गरि ५जना चाबहिलतीरबाट र २ जना सूर्यविनायक चोकमै भेट हुनेगरी ७ जनाको टोली जाने निधो ग¥यौ । हामी ५ जना चाबहिलबाट मयूर यातायात चढी गौशाला, तिनकुने, कोटेश्वर, ठिमी हुँदै सूर्यविनायक चोकमा पुग्यौं । त्यहा २ जना साथी (सुरेन्द्र र रुपेन्द्र) हामीलाई पर्खिरहेका रहेछन् । हामी त्यहा पुग्दा बिहाको ८ बजिसको थिये । हामी ७ जना सूर्यविनायक चोकमा भेला भयौं र हाम्रो पाइला सूर्यविनायक मन्दिरतीर लम्किए ।
सुर्यविनायक मन्दिर डाँडामा रहेछ लामो सिडि उक्लिएर माथी मन्दिर जानु पर्ने । मन्दिरमा पुजा गर्नको लगि विभिन्न पुजाका सामाग्रिहरु ब्यापारीहरुले बेच्न राखेको देखियो
सूर्यविनायक गणेश भगवानको मन्दिर हो । र गणेश भगवानलाई लड्डु असाधै मन पर्ने हिन्दू धर्माजलम्वीहरुको मान्यता भएकोले विशेस गरेर यो मन्दिरमा भक्तजनहरुले लड्डु चढाउने गर्छन्
त्यसैले सबै ब्यापारीहरुले लड्डु बेच्न राखेको देखियो। विशेस गरेर मंगलबारको दिन गण्ोको पुजा आरधना गरिने भएपनि शनिबार पनि यो मन्दिर भिड नै देखियो । हामी पनि सिडि उक्लिएर मन्दिर गयौ धेरै भक्तजनहरु दर्शनको लगि लाइनबद्ध देखिए । गणेशको बाहन मुसा भएकोले मन्दिर अगाडि मुसाको प्रतिमा पनि स्थापना गरिएको छ । साथै विभिन्न देवीदेवताका मूर्तीहरु पनि छन् ।
हामी केहि समय मन्दिर परिसरमा बस्यौ । धार्मिक आस्था भएका साथीहरु मन्दिर गए र पुजा गरेर आएपछि हामी त्यहाबाट अलिकति माथी एउटा मन्दिर भएको ठाउमा गयौ । यो मन्दिरको एउटा विशषता रहेछ, बोलि फुट्ने बेला भएपनि नबोलेका बालबालिकाहरुलाई यो मन्दिरमा लगेर केहि समय छोडिदिएर बोलाउदा बोली फुट्छ भन्ने मान्यता रहेछ । सोहि अनुसार एक जोडी दम्पतीले आफ्नी छोरीलाई मन्दिर भित्र छोडेर आफूले बाहिरबाट बोलाउदै गरेको दृष्य पनि हामीले देख्यौ । केही समय पछि हामी यहाबाट तल ओर्लियौ र बिहानको खाजा त्यहिको एउटा होटलमा खायौ । खाज खाइसकेर हामी आफ्नो गन्तब्यतीर लाग्यौ । हामीले मन्दिरबाट दायातर्फको बाटो रोज्यौं। हामी यहाबाट हिड्दा ९ बजिसकेको थियो ।
हरियो जङ्गलको विचको बाटो एकदमै रमाइलो हामी गफिदै दृष्यहरु क्यामेरामा कैद गर्दै हास्दै अगाडि बढ्यौ । बाटो कालो पत्रे गरिएको राम्रो रहेछ मोटर प्रयोग गरेर आउने यात्रुहरुलाई पनि निकै सहज बाटो । केहि समयको मोटरबाटो हिडेपछि हामीले जङ्गलको बाटो जाने निधो ग¥यौ । जहिले पिज गरेको बाटो त हिडिराकै त होनी भनेर केहि दूरी हामीले केहि दूरी हिडेपछि थाहा भयो त्यो बाटो घ्याम्पे डाँडाँ जाने बाटो नभइ कुनै समुदायको गुठि अथवा कुल पूजा गर्ने स्थान रहेछ फेरि हामी त्यहाबाट फर्कियौ र अर्को बाटो लाग्यौ यो सहि बाटो रहेछ । चैत्र महिना भएकोले जङ्गल लालीगुराँसको फूलले राताम्मे भएर सजिएको थियो । मानौ त्यो लालिगुराँसले हामीलाई मुस्कुराउदै स्वागत छ है तपाइहरुलाइ भन्दैछ । जङ्गलका चराहरु हाम्रो स्वागतमा गित गाउदै अनि कोइली चन्दैछ को हौ को हौ सायद नया मान्छे देखेर होला । हामी पनि उस्को प्रश्नको उत्तर दिदै हामी हौ हामी भन्दै थियौ । कति रमाइलो प्रकृतिको काख अनि आनन्दित पनि । जङ्गलको बाटो ठाडो उकालो, उक्लिन अलि अफ्ट्यारो भए पनि हामी समूहमा भएकोले एकअर्कालाई समाउदै र रुखका बुटाहरु समाउदैं चार हात खुट्टा गर्दै हामी गघि बढ्यौं । कठिन परिस्थितीमा मानिस अझ सजग र चनाखो हुने रहेछ यस्को अनुभव पनि निकै नजिकबाट गरियो । बेहोरी प्राय हुने हामी यो बाटो हिड्दा आफुले फेरिरहेको प्रत्येक स्वाँसको अनुभव पनि गरियो । आफू जिविन रहेको अनुभव । यसरी लालीगुराँसलाई चुम्दै स्च्छ हावा फोक्सोमा भर्दै अघि बढ्यौ । बाटो धेरैनै लामो होला भन्ने हामीले सोचेका थियौ तर कति छिटो गन्तब्यमा हामी पुगिसकेछौं करिब १ घण्टामै हामी आफ्नो गन्तब्यमा पुग्यौं । डाँडाँको थुम्कामा पाइलट बाबाको आश्रम निकै सुन्दर रहेछ । यहाँबाट भक्तपुर र काठमाडौंको दृष्य राम्रोसंग देखिन्छ । पाइलट बाबाको आश्रममा प्रवेश गर्नको लागि रु. १० शुल्क लाग्ने रहेछ । हामीले सुनेअनुसार पहिला यहाँ प्रवेश गर्न शुल्क लाग्दैन थियो अहिले आश्रमको मर्मत तथा अन्य कार्यको लागि शुल्क उठाउन सुरु गरेका रहेछन् । आश्रममा ध्यान गर्ने हल, गणेशको मन्दिर, दूर्गाको मन्दिर, र शिवको मन्दिरहरु रहेछन् । पाइलट बाबा आश्रम निकै शान्त र सुन्दर छ । यहा भ्रमणको लागि आन्तरिक पर्यटकहरुको आगमन निकै हुने रहेछ । यहाँ योग ध्यान पनि गराइन्छ । यो स्थान छोटो दूरीको ज्ष्पष्लन को लागि एकदमै उपयूक्त स्थल हो । चैत बैशाखमा त यहाँ झनै रमाइलो हुन्छ लालिगुराँस र हरियो जङ्गलले रोमाञ्चित बनाउछ । साथै प्रकृतिको सुन्दरतालाई अझ नजिकबाट अनुभव गर्न सकिन्छ ।
आश्रमको घुमफिर सकेर हामी आश्रम नजिकैको खुला आकाशमुनी विषाल चौरमा बस्यौं । हामीले आफ्नो साथमा खानको लागि रोटि, दहि, फलफूल र फुरन्दाना ल्याएका थियौ । हामी गोलबद्ध भएर बस्यौ अनि खानेकुरा खायौ खुला आकाशको मुनि चौरमा बसेर आहा! कति रमाइलो यो रमाइलो होटेलको सफा टेबलमा बसेर ध्बष्तभच लाई इचमभच दिएर ल्याएको खानामा कहा ? हामी सबै भोकाएको हुनाले हामीले खानेकुरा निकै स्वाद लिएर खायौं । खनेकुरा खाइसकेपछि हामी त्यहाँबाट घर फकियौ घर फर्किने बेलामा हामी पहिले आएको बाटो नभइ अर्को मोटर गुड्ने बाटोबाट ओरालो लाग्यौ यो बाटो पाइलट बाबाको आश्रमको प्रवेशद्वारबाट तल सूर्यविनायक मन्दिर सम्मनै पिच गरिएको छ । सवारी साधनमा आउने पर्यटकहरु यहि बाटो भएर आउने गर्छन् । शहरको कोलाहल र धुलो धुवाबाट कहिलेकाहि स्वच्छ बातावरण र प्रकृतिसंग नजिक हुनको लागि यो स्थान निकै उपयुक्त छ । हामी पुनः हरियाली हेर्दै अनि लालिगुराँसलाई बिदायीको हात हल्लाउदै तल झर्यौ लालिगुराँसले पनि छिनभरमै पिरति लगाएर फेरी फर्कि आउनु है भन्दै आफ्नो विदाइको हात हल्लाइन् । यसरी हामी सुर्यविनाय चोक पुग्दा दिउसोको १ बजिसकेको थियो। यहाँबाट हामी आ आफ्नो घर फर्कियौ ।